परम्परागत भन्दा पनि विश्व कला जगतमा हामी जानैपर्छ : कुलपति कर्माचार्य
नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान(नाफा)मा तेस्रो कुलपतिका रुपमा कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य नियुक्त हुनुभएको छ । विसं २००४ मा जन्मनुभएका कर्माचार्य २०६६ सालमा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव बन्नुभएको थियो । विसं २०२१ देखि चित्रकला साधनामा लाग्नुभएका उहाँसँग कला क्षेत्रका सङ्घसंस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । उनै केके कर्माचार्यसँग ललितकलाको विकास र चुनौतीका विषयमा आज राससले कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग श्याम रिमाल र नारायण ढुङ्गानाले गर्नुभएको
कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
-प्राज्ञ सभाको छनोट त भैसकेको छ तर एक्सपोज गरिसकेको छैन । अलि ढिला भइरहेको छ । अब आइतबारतिर होला ।
नाफाको आगामी चारवर्षीय योजना के के हुनेछन् ? - अब हामी तीन जनाको शपथ भयो, अरु बाँकी नै छ । अहिले निर्णायक कुराहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौंँ । अनौपचारिक रुपमा भन्दा कलाको समग्र विकास गर्नुपर्यो । हरेक प्रदेशमा गएर प्रादेशिक ढङ्गबाट कलालाई विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो परम्परागत रुपमा गरी आएको राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी अर्काे साल हुनेछ । त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, त्यो परम्परागत भयो । त्यसले विकासभन्दा पनि हल्लैहल्ला बढी भयो । त्यसलाई सुधार गर्ने योजना छ । अर्काे सबैभन्दा पहिले त हामी त अहिले सुकुम्बासी भएका छौँ । बस्ने ठाउँ बनाउनुपरेको छ । निवर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले केही पूर्वाधार बनाउने योजना गरेको छ । त्यसलाई छिट्टै पूरा गर्ने योजना छ ।
त्यो पूर्वाधार बनाउने योजना अघिल्लो वर्ष नै पारित भएको होइन ? --कार्यक्रम पारित भएको हो । त्यो कार्यक्रम अगाडि गइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । फलोअप(अनुगमन) गर्नुपर्छ । त्यसै त हुँदैन ।
यहाँले माथि भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रदर्शनीको कुरा, तर अब त तयारी गर्नुपर्ने हो, ढिला भएन र ? जेठ २ गते हुने हो पहिले पहिले कार्यक्रम । पछि आएर चाहिँ यो अघिको कार्यकालमा भदौमा पुग्यो । भूकम्पलगायत भौतिक समस्याले सरेको हो । व्यवस्था गर्न गाह्रो छ, कुरा गर्नलाई पो सजिलो छ । अब आउने वर्ष गर्ने सोचाइ छ । चार पाँच महिना बाँकी छ । त्यतिमा भएन भने पनि सारेर गर्ने हो । त्यसलाई नियमित रुपमा गर्नुपर्छ तर चार वर्षभित्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
हो, त्यो क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । हाम्रा पूर्वकुलपतिज्यूको कुरा अनुसार उहाँहरुकै समयमा सो निर्णय भयो, भित्री कुरा हामीलाई थाहा छैन । कमसेकम जग्गा दिने नै हो भने सल्लाह गर्नुपथ्र्याे । यो विषय सरकारले जिम्मा लिने कुरा हो, सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । नाफा मगन्ते हुने स्थिति त हुनु भएन । एकेडेमीहरु गठनभन्दा अघि नै भएको छलफलमा नाचघर सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने र नाफाले आफ्नै ठाउँ(सीता भवन, नक्साल, बालसङ्गठन रहेको भवन) मा बस्ने भनेर हामी यहाँ आयौं । अब उहाँहरु(सङ्गीत एकेडेमी) जानु भएन, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरु बहालमा बस्दै आउनुभयो र समस्या बढ्दै आएपछि आत्तिनु भयो । यहाँ धेरै जग्गा छन् नि सरकारका, खोज्यो भने पाइहालिन्छ नि ।
सरकारलाई केको दुःख हुन्छ र ? यो कुरा अदालतमा गएको छ, अदालतले एउटा फैसला गर्ला ।
जतिपनि हाम्रा कला सिर्जना भएका छन्, तिनको संरक्षणका लागि नाफाले व्यक्तिगत रुपका जस्तै सम, वाङ्देल, मिश्र आदिका कलाकृति व्यक्ति व्यक्तिका घरमा छन्, कतिपय बेचिए होलान्,
हैनहैन, नाफा प¥यो । कि त सरकारले हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो, सुविधा दिनुपर्यो तर गर्नुचाहिँ पर्ने हो । कसैले आफ्ना कोठामा सङ्ग्रहालय बनाएका छन् । अग्रज कलाकार चन्द्रमान मास्केको परिवार उनको कलाकृति सरकारलाई दिन तयार पनि छ । हामी यसबारे सरकारलाई घच्घच्याउँछौंँ ।
नाफाका पहिलो कुलपति किरण मानन्धरले आफू नियुक्त हुँदा अब कुनै पनि कलाकार भोको रहनु पर्र्दैन भन्नुभएको थियो । त्यो बेला यहाँ सदस्य सचिव हुनुहन्थ्यो । त्यो भनाइको सार्थकतापूरा भयो कि भएन ? नभएको भए नाफाले कलाकारका लागि अब के गर्नेछ त ?
-उहाँले त्यसो भन्नुभयो । त्यो त्यति सजिलोसँग हुने त होइन । त्यो भनेको कलाको विकास गर्ने हो । यसका लागि अनेक बाधाअड्चन आउने गर्छन् । एउटा भूकम्पले पनि बाधा गर्यो। संस्थागत रुपमा पनि बाधाअड्चन भयो । त्यसकारण काम गर्न सकिएको देखिएन । कलाको विकास भयो भने सबैको विकास हुन्छ । यो दृष्टिकोण मेरो हो । गम्भीर कुरा एउटा भन्छु हामीकहाँ पनि कलाको लिलामीको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसो भएमा कलाकारलाई केही राहत पुग्छ ।
अवश्य अरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । हामी मात्रै बसेर त विकसित देशमा पुग्न सक्दैनौं विदेशमा गएर हामीले पनि कलाको विकास हेर्नुपर्यो, हामीले पनि कला देखाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्यो। त्यो विकासमा लाग्नुपर्छ, विश्व कला जगत्मा हामी जानैपर्छ, सिक्नैपर्छ ।
तिनको पुनःनिर्माणमा हामी पनि सहभागी होऔँ भन्ने भन्ने कुरा आए जस्तो लाग्दैन, पुराना कलाकारले काम पाए होलान् तर नयाँलाई पारिश्रमिक दिएर आह्वान गरे जस्तो लाग्दैन ?
कला परम्परागत परम्परागत नै हुनुपर्यो, आधुनिक आधुनिक नै हुनुपर्यो ट्रेडिसनलहरुले गरिरहेकै छन् । हामीले सम्पदाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने हो । जोगाउनका लागि जनचेतना ल्याउने काम हामीले गर्ने हो । यो कामगर्ने भनेको पुरातत्व विभागले नै हो ।
परिचयपत्रको कुरा हामी पनि गर्छौं । आजीवन सदस्यताको कुरा चाहिँ भएको छैन । हामी पनि त्यो चाहन्छौंँ तर यसमा सरकारले बजेटले दिनुपर्यो, अर्थ मन्त्रालयले वास्ता गरिदिएन । कलाकार कल्याणकोष बनाऔँ भन्ने छ तर अक्षयकोष अलिकति मात्र छ ।
-हामीसँग ऐन छ । यसमा बसेर नियम बनाउनुपर्छ, त्यो मेरो सोचमा छ । अब हामी बनाउँछौं ।
-हाम्रो सम्बन्ध चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कासँग भएको छ । युरोप, अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बढाउने कोशिश गर्छु । त्यो सम्बन्ध नभईकन हाम्रो अस्तित्व नै हुन्न ।
धकेलियो राप्तीपारिको बिजुली सपना